Shir Madaxeedka IGAD oo la soo gaba gabeeyay iyo War murtiyeed ka soo baxay (Sawirro) - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa la soo gaba gabeeyay shir madaxeedkii 28aad ee IGAD oo maanta si rasmi ah uga furmay Muqdisho, iyadoo shirka uu socday muddo saacado ah.
Shir madaxeedka IGAD oo ay ka soo qeyb galeen Hoggaamiyeyaasha dalalka Kenya, Itoobiya iyo Uganda, iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo dalkiisa lagu marti gelinayay uu goob joog ka ahaa.
Ajandaha shirka looga hadlayay ayaa waxaa ka mid ahaa xaalada Soomaaliya, doorashooyinka dhowaan dhici doono iyo xaalada Koofurta Sudan.
Wasiiradda Arrimaha Dibadda IGAD Aamina Mohamed ayaa saxaafada u akhrisay War murtiyeed oo niyad dhis loogu muujiyo dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
War murtiyeed laga soo saaray shirka ayaa ka koobnaa 22 qodob, iyadoo Madaxda IGAD ay xaqiijiyeen Midnimada Soomaaliya, madax banaanida, dhuleed iyo xornimada, iyadoo lagu taageeray doorashada dadban ee dhowaan ka dhaceysa dalka.
Sidoo kale Madaxda IGAD ayaa ku baaqay in arrimha Soomaaliya looga dambeeyo dowladda Federaalka, hadii ay ahaan laheyd Xasilinta iyo dib u dhiska.
War murtiyeedka ayaa lagu soo hadal qaaday maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe, waxaana lagu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo gaba gabeeyo dhismaha Maamulkaas.
Madaxda IGAD ayaa lagu wadaa inay galabta ka ambabaxaan Muqdisho, kuna laabtaan dalalkooda, waxaana xusid mudan in shan maalmood magaalada oo dhan ay u xir xirneyd shirkan saacadaha kaliya ku koobnaa.
Shirkan ayaa ahaa kii u horeeyay oo lagu qabto Muqdisho, tan iyo markii la aas aasay Ururka IGAD sanadkii 1976.